DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.,နှုန်းလွန်လှိုင်းဇကာသန့်စင်စနစ်,နှုန်းလွန်စနစ်လှိုင်းစနစ် စက်ရုံ,၀င်ဆန့်နိင်စွမ်းကြီးမားေ, သာ စကင်စ,ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော အရည်ပျစ် စကင်စ
Product DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
Ultrasonic Sewing Machine သည် Ultrasoinc ၀ရိန် နည်းပညာဖြင့် သတ္တုများပေါင်းစပ်ခြင်း နှင့် သာမိုပလက်စတစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သုံးသော ဒစ်ဂျစ်တယ် Ultrasonic စက်ပစ္စည်းတခုဖြစ်သည်။ Ultrasonic Sewing Machine ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် ကြိမ်နှုန်းများ ၊ပါဝါ နှင့် Ultrasound နှေးကွေးခြင်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ပမာဏပြကရိယာ ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် sonotrode ၏ အရှိန်နှင့် လေဖိအားကို ထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။ တိကျသောရလဒ်များကို Non-woven ၈ဟေစနစ်ဖြင့် ရရှိနိင်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ရုံများ နှင့် စွန့်ပြစ်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များကို ကျယ်ပြန့်စွာလိုအပ်ပါသည်။
မော်ဒယ်: SC20 & SC40
- ကြိမ်နှန်း: 20 kHz
- အတိုင်းအတာ : 82 x 51 x 127h cm
- အလေးချိန်: 105 kg
- ကြိမ်နှန်း: 40 kHz
- အတိုင်းအတာ : 85 x 55 x 130h cm
- အလေးချိန်: 95 kg
SC20 and SC40 ချုပ်စက်များသည် လုပ်ဆောင်ချက်များမြန်ဆန်ပြီး စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် ချုပ်စက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်ဆက်မပျက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Ultrasonic Textile Cutting ကို အထည်စက်ရုံများသာမက တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများ၊ စစ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်သည် အစိတ်ပိုင်းများ၊ အပြင်ဘက်သုံးပစ္စည်းများ နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဖိုက်ဘရစ်( fabrics) များတွင်းပါအသုံးပြုလာကြပါသည်။
ပေါင်းစပ်ထားသောဖိုင်ဘာအမျှင်များဖြတ်တောက်ရာတွင် manually စနစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ 40Hz ကြိမ်နှုန်းရှိ Ultrasonic ဂျင်နရေတာ အမျိုးမျိုးတင်ဆင်နိုင်သည့်အပြင် ပိုင်ဇိုအီလက်ထရစ် ကြွေထည်ပစ္စည်းများ နှင့် Machete ပုံစံ Ultrasonic ဆိုနိုထရုတ် စွမ်းအင်ပြောင်းကရိယာများကိုလဲ ထပ်ပေါင်းတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဘီးများပေါ်တွင် တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် မောင့်ထ်(mointed) များကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ထားကာ ကွင်းများတစ်လျှောက် ဖြတ်တောက်ခြင်းကို အထောက်ကူပြုပါသည်။
Untrasonic နည်းပညာဖြင် ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလဲ manualစနစ် semiအော်တိုစနစ်၊ အော်တိုစနစ်ဖြင့်လဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲဆိုများ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်ကိုက်ညီရုံသာမက ထုတ်ကုန်၏စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လဲ ပြည့်စုံပါသည်။ Ultrasonic ချိတ်ခတ်ခြင်းကဲ့သို့သော် ပိုလီမာတွင်ပါသောသို့မဟုတ် rayon အဖြစ်ပဲ ၂၅% အမျှင်များ၏ အထည်ပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Ultrasonic Food Cutting ဖြတ်တောက်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် စောက်သောက်ကုန်များ၏ အမျိုးအစားများနှင့် မာခြင်း ပျော့ခြင်းများအပေါ်မမူတည်ပဲ စားသောက်ကုန်များ၏(ဥပမာ အဆီ၊သကြား၊ခရင်၊ပျားရည်၊ ချော့ကလက်) မူလအခြေနေကိုပျက်စီးခြင်းမရှိကြောင်အာမခံပါသည်။ Ultrasonic Food Cutting ကို ဖြတ်တောက်ရခက်သော(ဥပမာ ချိစ်၊ ထောက်ပတ်) နို့ထွက်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် မီးအားပေးစက်သည် Ultrasonic စားသောက်ကုန်ဖြတ်စက်၏ ထွက်နှုန်း တိုးခြင်း လျော့ခြင်းနှင့်၊ အချိန်စီမံခြင်းကို ထိန်းငြှိနိုင်ပါသည်။
Ultrasoinc စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြတ်စက်ကို အလိုလျောက်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ထဲတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်အရ အန္တာရယ်ကင်းစွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆူညံမှုနည်းပါသော 20,30 မှ40 Hz seriesများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
- စေးကပ်မှုမရှိသော 20Hz knife
- သန့်စင်ထားသော ဖြတ်တောက်သည့် မျက်နှာပြင်
- ကျစ်လစ်ခိုင်မာမှုရှိသော Ultrasonic တည်ဆောက်ပုံ
- စံချိန်ပြည်မှီစွာ တည်ဆောက်ထားသော စက်
- ပမာဏများပြားသော ထုတ်ကုန်များကိုလဲ ဓားသွားလဲလှယ်ခြင်းမပြုပဲ ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။
- ထုတ်ကုန်၏ အချင်းပမာဏ၊ အလေးချိန်၊ အထူ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
- ဆေးကြောသန့်စင်ရန်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူပါသည်။
- ဓားအရွယ်အစား ၃၀၀ မမ ဗြက်အထိ အကြီးဆုံးရှိပါသည်။
- အလျားလိုက် ၆၀၀၊၁၂၀၀မမ အထိဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။
ဖြတ်တောက်နိုင်သော အရှိန် တစ်မိနစ်ကို အချက် ၆၀ မှ ၁၂၀
Ultersonic စနစ်သုံးဓားသွားများ၏ အချက်အလက်များ
- Ultrasonic ဓားသွားအရွယ်အစားများကို သုံးစွဲသူများ၏ တောင်းဆိုချက်အလိုက် ပြုလုပ်ပေးပါသည်
- သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အစာအသောက်များ၏ အထူ၊သိပ်သည်းဆ နှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများအပေိါမူတည်ကာ ဓားသွား၏ ပုံစံနှင့် အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
ဓားသွားများကို တိုက်တေနီရမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ကျန်းမာရေး စံညွှန်းများဖြင့်ကိုက်ညီအောင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။အလိုလျောက်စနစ်များဖြင့်ကိုက်ညီ မှုရှိပါသည်။
ultrasonic နည်းပညာဖြင့် အလွှာလိုက်ပိုင်းဖြတ်နိုင်သော အစားအသောက်များ နမူနာ
1 Mechanical Industry & Degreasing
3 Chemical Labs
4 Cleaning of Metallographic, Ceramic &
5 Firearms Maintenance
6 Jewels & Clock Industry
7 Winch Maintenance
8 SCUBA & SCBA Cleaning
9 Dental / Medical & Infection Control.
"Ultrasonic Cleaners သည် ခေတ်မှီသည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသည်၊ ဈေးသက်သာသည်။ အညစ်အကြေးများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖုန်မှုန်များ၊ ဆီ၊ အမဲဆီ၊ သေးငယ်သောအမှုန်လေးများ၊ အပိုင်းအစလေးများ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဖုန့်မှုန့်လေးများ၊ ဇီဝဖလင်များ၊ အော်ဂန်နစ် အစ်တ်အပိုင်းလေးများ၊ အခြားသောသေးငယ်သည်အစ်ိတ်ပိုင်းအမှုန်လေးများ၊ (စက်အပိုင်းအစလေးများ၊ဂီယာ၊မှို၊ ဆာဂျရီ ကရိယာ၊ ဒီဂရိတိုင်းကရိယာ)နှင့် အခြားသော ရှုပ်ထွေးသောဂျီသြမေတြီများ ဖယ်ထုတ်ရာတွင်သုံးသည်။
1 ပိုင်ဇို အီလက်ထရစ် (Piezoelectric) စွမ်းအင်ပြောင်း ကရိယာ
2 Sweep စနစ် လျှပ်စစ်လှိုင်းထုတ် မော်ဂျူး
3 ၈တ်စ်၊ အပူ နှင့်Ultrasonic (EPဗားရှင်း) ထိန်းညှိရန် မိုက်ခရိုပရောဆက်ဆာအခြေခံ ဆားကစ်
4 ရေလုံသော ချိတ်စည်းများတွင် သံချေးမတက်သော သံမဏိ ခေါင်းTIG ၀ရိန်ထောက်ပံသည်။
5 အထူးပြုပြင်ထားသော သံချေးမတက်သော သံမဏိမျက်နှာပြင်
6 ရေစိုခံ LED မျက်နှာပြင်ပါရှိသော ကီးဘုတ်( EPဗားရှင်း)
7 ရေထွက်ပေါက် ½”
ပတ်လည် စနစ် နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များ
- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရ လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်
- ထိခိုက်မှုကင်းစွာ သန့်ရှင်းနိုင်သည်။
"Ultrasonic လှိုင်းသည် ဇကာကွက် ၀ါယာမှတဆင့်ဖြတ်သန်းကာ သန့်စင်ပေးပါသည်။
1 စက်မှုစက်ရုံသုံး ဂျီးချွတ်ဆေးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ
2 အီလက်ထရောနှစ် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ
4 သတ္တုဖော်စက် သန့်စင်ခြင်း၊ ကြွေထည့်များနှင့် သတ္တုနမူနာများသန့်စဉ်ခြင်း
6 ကျောက်မျတ်ရတာ နှင့် နာရီလုပ်ငန်းများ
8 SCUBA & SCBA သန့်စင်ခြင်း
9 သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါ ကူးစက်ခြင်း ထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Industrial Ultrasonic Cutter သည် Untrasonic ကြိမ်နှုန်းကိုအသုံးပြုကာ အတွင်းပိုင်းကြွေထည်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်ခံနိုင်လျော့ချခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ရခက် သောပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်ရလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ရာတွင်သုံးသည်။ မိုက်ခရိုစကုပ် နှင့် ရွေ့လျားမှုမြန်ဆန်သော ဓားသွားသည် ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ချောမွေ့လွယ်ကူစေသည်။မာကြောသော ပစ္စည်းများကိုဖြတ်ာရာတွင်လဲအလွန်ပင်လွယ်ကူချောမွေ့ပါသည်။
- မြန်နှုန်းမြင့်မားသော Ultrasonic စနစ် တုန်ခါမှု(22,000 times per second) လုံခြုံစိတ်ချခြင်း၊ အတင်ပြေချော့မွေ့ခြင်း၊ ဖြတ်တော်ရာတွင်ဖိအားအနည်းသာအသုံးပြုခြင်း
- သမာရိုးကြ Untrasonicဖြတ်စက်များနှင့်မတူပဲ Epoxyအခြေခံ ပရင့်ဘုတ်များဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။
- ဖုန့်မှုန့်များပျံ့နှံ ခြင်းကို အဲဆောဖြတ်စက်( air saws)များ နှင့်ယှဉ်၍ထိရောက်စွား တားဆီးပေးပါသည်။
- ကျစ်လစ်၍ပေါ့ပါးသော လက်ကိုင်များကြောင့် Ultrasonicဖြတ်စက်ကို ကိုယ်တွယ်ရလွယ်ကူပါသည်။
- စက်နှင့် အပိုအစိတ်အပိုင်းများကို သိမ်းဆည်းရန် အလူမီနီယမ် သေတ္တာပါရှိသောကြောင့် လွယ်ကူစွာ သယ်ယူသွားနိုင်ပါသည်။
- သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူကာ ခြေထိန်းတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပါသည်။
- အလူမီနိယမ် နှင့် ကြေးနီ ကဲ့သို့သော သတ္တုပျော့များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း
- PCBမှ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတတောက်စစ်ဆေးခြင်း
- ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ၊ ဖန်ဖိုင်ဘာ၊ aramid ဖိုင်ဘာများကဲ့သို့ ဖိုင်ဘာများကိုဖျတ်တောက်ကာ အင်တွဲ ဖြင့်ပေါင်းစပ်စေသည်။
Resin: ABS, PP, PET, acrylic.
High Capacity Screeners သည် အရည်နှင့် ပျစ်စေးသောအရည်များထဲမှာ ပါဝင်နေသော ပစ္စည်းများ ခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဝင်ဆန့်နိုင်သောပမာဏကြီးမားကာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပါသည်။
မော်ဒယ်: VLH 1200 - 1500 & HC 1200 - 1500
VLH 1200 – 1500: သည် ဝင်ဆန့်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော အရည်နှင့် ပျစ်စေးသောအရည်များကိုတုန်ခါဇကာစနစ်ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောစက်တခုဖြစ်ပါသည်။ အစိုဓာတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ အရည်ပျစ်လုပ်ငန်းစဉ်၊ စွန့်ပစ်ရေလုပ်ငန်းစဉ်များတွင့် ဝန့်ဆံနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်ပါသည်။ VLM lineထက်၃ဆပိုမိုကြီးမားပါသည်။
- IP 65 အဆင့်ရှိ အီလက်ထရစ် တုန်ခါ မော်တာ
- ပာဝင်သောအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို AISI 304,316 အဆင့်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
- ဇကာ သန့်စင်စနစ်ပါရှိပါသည်။
- စိတ်ချယုံကြည်ရသော လုံပိတ်စနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။
- ပမာဏများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။(greater output per screening m2 ) ထို့ကြောင့် စံစကင်စနစ်ပေါ်မှ ခြရာ( Foodprint) ၇၀%လျော့ချနိုင်ပါသည်။
HC 1200 – 1500: တုန်ခါစက်သည် ထုတ်ကုန်များအတွက် အညစ်အကြေးများဖယ်ရှာရန် စကင်နစ်သုံးကာVLH လိုင်းများနှင့်သိပ်သည်းဆ တူသော အရည်နှင် အရည်ပျစ်များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ VLM line ထက် ၃ဆ ပမာဏပိုမို ဝင်ဆန့်ပါသည်။ စက်တွင်အကာတစ်ပါထဲပါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
- သန့်စင်လွှာတစ်လွှာနှင့် အမှုန့်ခါဇကာနှစ်လွှာပါရှိပါသည်။
- IP 65 အဆင့်ရှိ အီလက်ထရစ် တုန်ခါမော်တာ။
- ဇကာ သန့်စင်စနစ်ပါရှိပါသည်။
- လုံခြုံရေး စကင် အပိုပါရှိသည်။
- ထိန်းချုပ်ရေးစက်သည် ဇကာသန့်စင်စနစ်ပျက်စီးသွားသောအခါ သတိပေးပါသည်။
- ဇကာ ပျက်စီးသွားသောအခါ လုံခြုံရေးစက်မှ သတ်ိပေးပါသည်။
ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (ဇကာ ၆ခုအထိအစားထိုးနိုင်ပါသည်)
DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD. ABOUT US DR- Sonic Engineering Co., Ltd ယနေ့ခေတ် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စက်ရုံလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ထောက်ပံပေးနေသော ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့ ကုမ္ပဏီ သည် Ultrasonic နည်းပညာကိုပြည်တွင်း(ထိုင်း) တွင်သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများကိုပါထောက်ပံပေးနေသော ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်သည် အရည်သွေးမြင့်များသော ( ဥရောပ ထုတ်) စက်ပစ္စည်းများကို သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များကို ထောက်ပံပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ အထူးသဖြင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည်စက်ရုံများ၊ အလိုလျှောက်စနစ်သုံး စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပလက်စတစ် လုပ်ငန်း စက်ရုံများ အထည်လုပ်ငန်း စက်ရုံများ၊ အလှကုန်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ၊ ထုပ်ပိုးမှု လုပ်ငန်းစက်ရုံများ နှင့် အထွေထွေ စက်မှုလုပ်ငန်း အများစုအတွက် လိုအပ်သော စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနေသာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အခက်အခဲ ဖြစ် ခဲ့ပါကလဲ on-site ၀န်ဆောင်မှုဖြင့် အပိုပစ္စည်းများကိုလဲ အဆင်သင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှ အခြေနေအမျိုးအတွက်သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထောက်ပံပေးလျက်ရှိပါသည်။ DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မတည်ရင်းနီးငွေ ဘတ် ၁၀ သန်း ဖြင့်စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည် ခေတ်မီသောစက်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲသူတို့၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြည့်မှီအောင် ထောက်ပံပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အရည်သွေးမြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များကို သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် သုံးစွဲသူများကို ထောက်ပံ့နိုင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အသင့်ရှိသော စက်ပစ္စည်း နည်းပညာများနှင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ပြဿာနာ များကို အရည်အသွေးကောင်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်